Kugadziridza kwekuvaka - China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Co, Ltd.
Zvivakwa zvekushambadzira zvinoreva zvivakwa zvakakosha zvekuchengetedza zvinhu uye kutakura. Logistics park inoreva nzvimbo ine nzvimbo dzakasiyana siyana dzekushambadzira pamwe nemhando dzakasiyana dzemabhizimusi ekushambadzira dzinogoverwa pakati munzvimbo munzvimbo dzinogadziriswa mashandiro uye pane nzira dzinoverengeka dzekutakura dzakabatana. Ichowo nzvimbo yekuunganidzira emabhizimusi ekushandisa aine chiyero uye akasiyana mabasa ebasa.
Kuitira kurerutsa kuwanda kwemigwagwa yemumaguta, kudzikisira kumanikidza kwemaindasitiri pane zvakatipoteredza, chengetedza kubatana kwemaindasitiri, kuenderana neyakaitika indasitiri yezvigadzirwa, ziva kuyerera kwezvinhu zvakanaka, mumasabhabha kana munharaunda yemadhorobha-ekumaruwa padyo nepakati traffic arteri, akati wandei ekugadzirisa mapoka ane yakasimba kutakura, kuchengetedza, musika, ruzivo uye manejimendi mabasa akatsanangurwa. Kubudikidza nekuvandudzika zvishoma nezvishoma kwezvivakwa zvakasiyana siyana uye zvivakwa zvebasa, ichipa akasiyana siyana marongero ekukwezva nzvimbo dzakakura dzekuparadzira (kugovera) nzvimbo kuti dziungane pano nekuvaita kuti vawane mibairo yakakura yakaita basa rakakosha mukubatanidza musika uye kuona kudzikiswa kwemitengo yezvinhu. manejimendi. Panguva imwecheteyo, yakadzora mhedzisiro dzakasiyana dzakaunzwa nekuparadzirwa kwenzvimbo dzekuparadzira dzakakura pakati peguta uye ikava indasitiri yekutanga inotsigira hupfumi hwazvino.
Mukati meimwe nharaunda, zviitiko zvese zvine chekuita nechinhu kutakura, zvinhu uye kugovera, kusanganisira kutakurwa kwenyika nepamusha, kunoonekwa kuburikidza nevashandisi vakasiyana (OPERATOR). Vashandisi ava vanogona kunge vari varidzi kana varidzi vezvivakwa nezvivakwa (matura, nzvimbo dzekuputsa, nzvimbo dzekuverenga, nzvimbo yehofisi, nzvimbo dzekupaka, nezvimwewo) zvakavakirwa ipapo. Panguva imwecheteyo, kuti iteerere pamitemo yemakwikwi emahara, musha unotakura zvinhu unofanirwa kubvumidza mabhizinesi ese ane hukama zvakanyanya nezviitiko zvebhizinesi zvataurwa pamusoro kuti zvipinde. Musha wekutakura zvinhu unofanirwawo kuve nezvivakwa zveveruzhinji kuzadzisa zvese zvataurwa pamusoro apa. Kana zvichikwanisika, inofanira zvakare kusanganisira yeruzhinji masevhisi evashandi nevashandisi 'zvishandiso. Nekukurudzira kutakurwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana, zvakafanira kushandira musha wekutakura zvinhu nenzira dzakakodzera dzakasiyana-siyana (ivhu, njanji, gungwa rakadzika / chiteshi chemvura yakadzika, rwizi rwomukati nemhepo). Chekupedzisira, zvakafanira kuti musha wekutakura zvinhu unofanirwa kuitwa nemutumbi mumwe chete (RUN), ingave yeruzhinji kana yakavanzika.
Logistics zvivakwa ndezveruzhinji zvivakwa. Nekukurumidza kukurumidza kwenguva, zvivakwa zvekushandisa zvinoratidzwa nenzira yayo yakasarudzika. Mapaki ezvigadzirwa akasarudzika anoenda akananga kuzviteshi zvengarava kana nhandare, uye nzvimbo dzekuparadzira dzakasarudzika dzinoenda dzakananga kunzvimbo dzakasiyana dzekuparadzira, dzichiumba chakabatana zvinhu.